Sawirro: Jurgen Klopp Oo Sharaxaad Isbedelka Farsamo Ee Uu Ku Sameeyay Ciyaarta Liverpool Ee Keentay Guulahoodii Xiriirka Ahaa - Laacib.net
Sawirro: Jurgen Klopp Oo Sharaxaad Isbedelka Farsamo Ee Uu Ku Sameeyay Ciyaarta Liverpool Ee Keentay Guulahoodii Xiriirka Ahaa
by Saed Balaleti | Tuesday, Nov 21, 2017
Tababare Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday sida ay Liverpool ay u baratay inay dib u degaan si ay hore ugu duulaan.
Reds ayaa caawa u safreysa Savilla, iyadoo kooxda ay ku jirto qaab ciyaareed aad u wanaagsan ka dib markii ay soo dardareen kooxaha Maribor, Huddersfield, West Ham iyo Southampton.
Afartii kulan ee ugu danbeysay waxa ay dhaliyeen 13 gool, laakiin waxaa muhim aheyd in laga dhaliyay kaliya hal gool – waxaana tababarahooda uu qirtay in isbedel ay ku sameeyeen falsafadooda difaacasho inay keentay weerarkood aaan naxariista laheyn.
Horaantii xilli ciyaareedkaan, tababaraha Jarmalka ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin qaabkiisa weerarka, inkastoo ay guuldarro culus ay ka soo gaartay City iyo Spurs, laakiin waxa uu haatan qirtay inuu isbedel yar ku sameeyay taatikadiisa.
“Waan ka hadlay arintaan ka dib ciyaartii West Ham – waxaan dooneynay inaan kubad difaacasho u badan ciyaarno. Taasi waa run” ayuu yiri.
“Wax sidaas ah ugama duwana wixii aan sameynay kulamadii ugu danbeeyay. Dadka kale ayaanan ogaanin, inkastoo mararka qaar ay ciyaartu aheyd mid degdegsiimo leh.
“Waxaa jira waxyaabo badan oo aan bedelay si aan kooxda uga dhigno mid xasiloon. Kulankii West Ham anagoo ka warqabna waxa ay ku sameyn karaan gurigooda, waxaan go’aansanay inaan gadaal u yara degno.
“Marnaba kama labalabeyno inaan waxyaabo kala duwan sameyno, kaliya waxaan u baahanahay waqti aan ku sameyno. Waa ay inoo cadeyd sida aan kubada u difaacaneyno, haddii ay kubada ina siiyaana aan rogaal celis degdeg ah u sameyno.”